Dal muslim ah oo dadkiisa ka mamnuucay in aysan xannaaneysan karin Eeyga | Aayaha
Dal muslim ah oo dadkiisa ka mamnuucay in aysan xannaaneysan karin Eeyga
Aayaha editorJanuary 30, 2019
Caasimadda dalka Iiraan waxaa laga mamnuucay dadweynaha dalkaasi inay Eeyga ay ku dhex wataan gudaha magaalada Tehraan, waa tallaabo la doonayo in looga hortaggo in dadka dalkaasi ay Eeyga ku xannaaneystaan guryahooda.
Taliyaha booliska Tehraan, Xuseen Raxiimi ayaa sheegay in xafiiska dacwad oogaha guud ee dalkaasi uu u ogolaaday in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado dadka lagu arko iyagoo Eeygooda ku dhex wata meelaha ay dadka isugu yimaadaan sida gooba loo damaashaad tego.
‘Cabsi iyo walwal’
Taliyaha ayaa wakaaladda wararka ee Young Journalists Club u sheegay in la mamnuucay in dadka ay dhaqdaan Eeyga taas oo cabsi iyo walwal ku reebtay qaar kamid ah shacabka dalkaasi.
Janaraal Raxiimi waxaa uu sheegay in sharcigan uu sidoo kale mamnuucaya in Eeyga ay dadka ku dhex wataan baabuurkooda.
“Waxaa mamnuuc ah in Eeyga aad ku dhex wadato baabuurkaaga, haddii laguugu arko arrintaasi, tallaabo ayaa laga qaadi doonaa dadka iska leh baabuurkaasi” ayuu yiri taliyaha booliska Tehraan.
Waxaa Jamhuuriyadda Islaamiga ee Kacaanka Iiraan ka taagna khilaaf tan iyo sannadkii 1979-kii kaas oo ku saabsan in dadka ay guryahooda ku xannaaneysan karaan Eeyga ama ay ku wadan karaan goobaha dadka ay isugu yimaadaan, waxaana marar badan dhacday in dadka qaar laga hor istaago in Eeyga guryahooda ay ku heysan karaan.
Mas’uuliyiinta Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan ayaa rumeysan in Eeyga uu yahay ‘Nijaaso’ isla markaasna dadka xannaaneysta u arkaa inay yihiin dad taabacsan dhaqanka reer galbeedka.
Wasaaradda dhaqanka iyo arrimaha diinta ayaa sannadkii 2010-kii ka mamnuucday warbaahinta Iiraan in xayeeysiinta ay kusoo bandhigaan muuqallada ama sawirrada xayawaanka Eeyga.
Shan sanno ka hor xubnaha baarlamaanka Iiraan waxay wadeen hindise sharciyeed dhigaya in dadka lagu arko iyagoo Eey ku dhex wata waddooyinka magaalada la ganaaxo sidoo kalena la karbaasho.
Ookiyaalihii Mahatma Gandhi Oo Lagu Xaraashay 340 Kun Oo Doollar
Haweeney ay lasoo gudboonaatay xaalad ah inay maqasho codadka hawenka oo kaliyah
3 ways to empower yourself in a relationship
Canug Ku Dhashay Afar Lugood & Aabaha Dhalay Oo Si Layaab Leh Iskaga Fogeeyay
Guurka Qasabka Ah Oo Keena Cudurkaan Halista Ah (Aqriso)
4 Siyaabood Oo Looga Gudbo Markaad Wali Jeceshahay Ninkaagi/Xaaskaagi Hore